Ubuntu Cinnamon inokuvavanywa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo | Ubunlog
Iindaba zamva nje kwi-Ubuntu Cinnamon: sele sinokuwuvavanya umxholo wakho kwaye kungekudala inkqubo yokusebenza
NgoLwesine odlulileyo, iCanonical ikhuphe i-Eoan Ermine, inguqulelo ka-Okthobha ka-2019 yenkqubo yokusebenza kunye nazo zonke incasa zayo ezisemthethweni. Lilonke, ngo-Ubuntu, kukho ii-flavour eziyi-8 ezikhoyo kwezi zikhankanywe apha ngasentla Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio kunye Ubuntu Kylin. Kodwa kwikamva eliphakathi siza kuthetha malunga nesithoba, kuba sele kukho iprojekthi eqhubekayo ukuze ICinnamon yoBuntu yiba nencasa esemthethweni.
Ekupheleni kukaSeptemba, inkokeli yeprojekthi eyaziwa njenge-Ubuntu Cinnamon Remix usixelele ukuba uza kukhupha ingxelo yetyala phambi kokuba u-Eoan Ermine abe semthethweni. Abakhange bafike ngexesha, kodwa kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo basixelele ukuba le nguqulo sele ilungile kwaye siza kuyivavanya kungekudala. Kwelinye icala, yintoni Sele ikhona iipakeji I-kimmo-gtk-umxholo y kimmo-icon-umxholo ezi yinxalenye yomxholo osetyenziswa ngu-Ubuntu Cinnamon ngoku.
Umxholo we-Ubuntu Cinnamon ngoku unokuvavanywa
Ngoku ungavavanya umxholo we-kimmo-gtk kunye ne-kimmo-icon-theme ekhaya, ngokuyifaka kwi-PPA yethu engazinzanga https://t.co/7udiT9nAvu ! Ukuba ufuna ukuba yi-geek, ungayifumana nakwi-github yethu, ehlala ihleli, https://t.co/KNGltYtsHN . Qiniseka ukuba uyayenza nge-19.10 Eoan! pic.twitter.com/j9Roel8O4k
-Ubuntu Cinnamon Remix (@UbuntuCinnamon) Oktobha 19, 2019
Ngoku unokuvavanya umxholo we-kimmo-gtk kunye ne-kimmo-icon-theme ekhaya, ukuyifaka kwi-PPA yethu engazinzanga https://launchpad.net/~ubuntucinnamonremix/+archive/ubuntu/unstable! Ukuba ufuna ukuba yi-geek, ungayifumana nakwi-github yethu, ehlala ihleli https://github.com/ubuntucinnamonremix. Qinisekisa ukuyenza nge-19.10 Eoan!
Ukuze songe indawo yokugcina izinto (esingazinzanga), kufuneka sivule i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Emva kwexesha sinokufaka iiphakeji, enye ibe ngumxholo kunye neyee icon, ngalo myalelo:
Sinokubakhetha ngokusebenzisa izixhobo ezinje nge-GNOME Retouching.
Umyalezo woLawulo ovela @ZeeSwirlz :
Siza kukhupha uvavanyo lwethu lokuqala kwakamsinya, ukufumana ingqalelo (ngendlela elungileyo), njengoko sifuna uncedo oluvela kuni bafana ukuba siqiniseke ukuba i-distro kunye nezicelo ziyasebenza kwaye ungasinika imifanekiso kwaye ube negalelo kuthi. Ulwazi oluthe kratya kungekudala.
-Ubuntu Cinnamon Remix (@UbuntuCinnamon) Oktobha 20, 2019
Umyalezo wolawulo osuka @ItzSwirlz: Siza kukhupha ingxelo yethu yokuqala yolingo kungekudala, ukufumana ingqwalaselo (ngendlela elungileyo), njengoko sifuna uncedo oluvela KUWE ukuqinisekisa ukuba usasazo kunye neeapps ziyasebenza kwaye ungasinika iifoto kwaye usinike igalelo kuthi. Olunye ulwazi kungekudala.
Okomzuzwana ngqo umhla wokukhululwa awaziwa ukusuka kwinguqulelo yokuqala ye-Ubuntu Cinnamon (Remix), kodwa kuya kufuneka ifike kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Xa ixesha lifika, kufuneka sikhumbule ukuba iya kuba yinguqulelo yesilingo eyenzelwe ukuze sikwazi ukuba nonxibelelwano lokuqala, kodwa hayi ukuyifaka kwizixhobo zemveliso. Eyona nto intle, njengoko sisenza ngaphambi kokuzama olunye ulwabiwo, kukuba siyifaka kwiVirtualBox, siqale umfanekiso kwiibhokisi zeGNOME okanye senze i-pendrive yofakelo ukuze siyisebenzise kwiSeshoni ebukhoma. Ngaba uziva uyenza ngoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Iindaba zamva nje kwi-Ubuntu Cinnamon: sele sinokuwuvavanya umxholo wakho kwaye kungekudala inkqubo yokusebenza
Xournal ++, isicelo sokubhala amanqaku ngesandla kwiifayile zePDF
Umhloli weWebSocket, inqaku elitsha eliza kufika kwiFirefox 71